२०७७ माघ २०, मंगलबार
नेपालदृष्टि । चाकडी धेरै किशिमका हुन्छन । अनि मान्छे र ब्यक्ति पिच्छे गर्ने दण्डवत पनि भिन्नाभिन्नै हुन्छन । केही त सामान्यनै लग्दछन । तर केही “हग्नेलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज” भनेझै हुन्छ । चाकडी अचम्मको छ । केही त अरुको चाकडी गर्दा गर्दै आफ्नो धोती खुस्किएको पनि थाँह पाउँदैनन्। र उसको धोती अरुले समालि दिनु पर्छ ।
मोरंग जिल्लाको सुनवर्सी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्य समितिको भेटघाट कार्यक्रममा लगभग सबै कार्यक्रर्ताहरु भेला थियो । भेला सोचे अनुरुप सफलनै भयो । कार्यक्रमको समापन पछि उक्त टोली मोरंगकै रतुवामाई नगरपालिकामा थकाई मार्दै खाजा खाने तयारीमा जुट्यो । टुंगो लाग्यो इटहरा रेस्टुरेण्टमा । उक्त टोलीको प्रमुख अथित्व हुनु हुन्थ्यो, नेपाली कांग्रेसकी नेता, पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला दिज्यू । उहाँ निकै कुशल राजनीतित्व बर्गमा पर्नु हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । किन की त्यहाँ उहाँले आफ्नो कुशलता र विवेकता देखाई हाल्नु भयो । कस्तो कुशलता भन्ने प्रश्न यहाँमा उठ्न सक्छ ?
चाकडीको सञ्जाल यस्तो हुन्छकी चाहेर पनि उत्कृष्ट कार्यक्रता नेताको चयनमा तथा आफ्नो पँहुचमा ल्याउँन सक्दैनन् । जसका कारण धेरै राजनीतिकर्मीहरु आफ्नो यत्रामा असफल देखिएका छन ।
सुलसुुले नजिकै उभिएको थियो । सुजता दिज्यू बाहिरबाट आएर काउण्टर नजिकैको टेवलबाट नेकपीन निकाल्नु भयो । र चिसो हात पुच्छै त्यस नेकपीनमा एक सर्को सिगान पनि पुच्छ्नु भयो । चारै तिर हेर्नु भयो डस्विन देखिएन । त्यतिखेरै एक युवक तुरुन्त देखा परे । तर उनी अचम्मको शैलीमा देखा परे । युवक हेर्दा कुनै चलचित्रका नायक जस्ता देखिन्थे । सुलसुलेले खासखुस सुने अनुसार : उनी खै बढो हो की तन्देरी हो, उनी त्यही दलका ठुलै नेता हुन रे । उनी किन एक्कासी त्यहाँ देखा परे तपाईलाई कौतुहल लाग्न सक्छ ?
हो, कुनै पनि तपश्वीको बाह् बर्ष पछि भगवान प्रकट भए । र भगवानले त्यो तपश्वीलाई “तथास्तु” को प्रसाद दिए । मानै त्यो प्रसाद तपश्वीले कसरी थाप्यो । अड्कल गर्नुहोस त ?
हो तपाईको अनुमा सही हो । शरीरलाई आधा निहुँराएर शाष्टङ्ग दण्वत गर्दै एक हातमाथि अर्को हातले छोएर मानै प्रसादै थापेझै ति युवकले वडो आदरपूर्वक त्यो नेकपीन आफ्नो हातमा थाप्न खोजे । तर उनी असफल भए । उनी उभिएका उभिएै भए । सुजता दिज्यूले त्यो नेकपीन नजिकैको डसविनमा फालिदिनु भयो ।
अव सुलसुले निक सोचमग्न भयो । किन भन्नु होला ?
हो ! मैले सोचेको र तपाईले बिचार गरेको कुरा मिल्यो । उहाँ एउटा राजनीतिज्ञ ब्यत्तित्व मात्र होईन दुरदर्शी र परिस्थीति अनुसार चल्न सक्ने कुशल राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ । यो दृश्यले सुससुलाई प्रष्ट भयो ।
उहाँले त्यो नेकपीन ती युुवकलाई नदिएर सिधैं डस्विनमा फाल्नु भयो । यसले धेरै कुराको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यो कुरा सुजता दिज्यूले देखाउँनु भयो ।
यहाँ कुरा नेकपीनको होईन । कुरा चाकडीको हो । यो चाकडीवादले गर्दा सही कार्यक्रता सही नेताको पहुँच बाहिर रहने गरेको देखिन्छ । चाकडीको सञ्जाल यस्तो हुन्छकी चाहेर पनि उत्कृष्ट कार्यक्रता नेताको चयनमा तथा आफ्नो पँहुचमा ल्याउँन सक्दैनन् । जसका कारण धेरै राजनीतिकर्मीहरु आफ्नो यत्रामा असफल देखिएका छन ।
लण्डनबाट नेपाल फर्कन चाहनेले राजदूतावासमा विवरण दिनुहोस
नेपालमा जति कडा लकडाउन त्यतिनै कोरोनाभाइरस संक्रमण बढ्दै
क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किदै
स्वास्थ्यचौकीमा एउटा मात्र औषधि